မထင်ထားသော ဘ၀ငရဲ – Grab Love Story
ညအမှောင်ကကြီးစိုးနေသည့်အပြင် တိတ်ဆိတ်နေသည့်အတွက် ပိုးလေးရင်ထဲ ကြောက်ရွံ့လာသည်။
ပိုးလေး ဒီအချိန်မှ အလုပ်ပြန်ရသည့်အတွက် မန်နေဂျာကို စိတ်တိုမိသည်။ ပုံမှန် (ရးဝ၀) အလုပ်ချိန်ကို အရေးကြီးသည်ဆို၍ ပြီးသည်အထိလုပ်ပေးရန်ပြောသဖြင့် လုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ အခုမှပြီးသွား၍ နာရီကြည့်လိုက်တော့ (၁၂း၄၈)။
မန်နေဂျာမှ အိပ်ရန်ပြောသော်လည်း ပိုးလေးမအိပ်ရဲ။ ဒီလူကြီးကနှာဘူးကြီးဟု သူငယ်ချင်းခိုင်သူဇာက ပြောဖူးသည်။ ထို့အပြင် ပိုးလေးကိုလည်း
တဏှာမျက်လုံးများဖြင့် ခဏခဏ ကြည့်သည်လေ။ ထို့ကြောင့် ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုးလေးတို့အိမ်က မဝေးပါ။ ကားမှတ်တိုင်တစ်တိုင်စာလောက်သာဝေးသည်။ သို့သော် လူပြတ်သည်။ နေ့ခင်းပိုင်းတောင် လူသွားလူလာသိပ်မရှိ။
ည (၁းဝ၀)ဆိုတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိ။ အမှောင်ထုအတွင်း လမ်းလျှောက်ရင်း စိတ်ချောက်ချားလာသည်။
အသံကြား၍လှည့်ကြည့်လိုက်သော်လည်း မည်သူမျှမရှိ။ ကြောက်စိတ်က ပိုမိုကြီးစိုးလာလေသည်။
အချိန်က ၃ စက္ကန့်လောက်သာ။ ပိုးလေးခေါင်းကို မာကျောသောအရာတစ်ခု ပြင်းထန်စွာကျရောက်လာကာ မေ့မျောသွားပါတော့သည်။
ပိုးလေး သတိရရခြင်း ပထမဆုံးအသိက ခေါင်းမူးနေခြင်းနှင့် မဲမှောင်နေခြင်းသာ။
လက်ကိုလှုပ်ကြည့်မိတော့ လှုပ်၍မရ။ လက်နောက်ပြန် ကြိုးတုပ်ခံထားရမှန်း သိလိုက်သည်။
မျက်လုံးဖွင့်သော်လည်း ဖွင့်မရ၊ အဝတ်မည်းနှင့် ပိတ်ချည်ထားသည်။ ခြေထောက်ကိုလည်း
ချည်ထားသည်။ပါးစပ်တော့ ပိတ်မထားပါ။ အော်ဟစ်ရန်စိတ်ကူးမိသော်လည်း
ဘယ်ကိုရောက်နေမှန်းမသိသဖြင့် မအော်ဖြစ်လိုက်။ ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ဟု တွေးမိသည်။ မိမိ
အခုရောက်နေသောနေရာမှာ ဘယ်နေရာနည်း။ အနည်းငယ်လှုပ်နေသဖြင့် မြေပေါ်တွင်မဟုတ်မှန်း သိသည်။
လှိုင်းစီးနေရသလို ခံစားမိသောကြောင့် သင်္ဘောပေါ်တွင်လားဟု ထင်မိသည်။
“ကျွီ…..” တံခါးဖွင့်သံကြားရသဖြင့် လန့်သွားသည်။ လူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ဝင်လာသည်။
“ဟေ့.. မင်းနိုးနေပြီလား၊ ဗိုက်ဆာနေလား” မေးခွန်း နှစ်ခု။ ပထမမေးခွန်းက ဖြေစရာမလိုတာမို့
“အင်း..ဆာတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မဘယ်ရောက်နေတာလဲ..”
အဖြေသာမက မေးခွန်းကိုပါ ပြန်မေးလိုက်သည်။
“မင်းအခု သင်္ဘောပေါ်မှာ၊ သွားရမှာက ဂျပန်နိုင်ငံကို၊။ မင်းမေ့နေတာ ၂ရက်ရှိုပြီ၊ ခဏစောင့်
ထိုလူကပြောပြီး အပြင်ထွက်သွားသည်။ သူမခေါင်းထဲ မေးခွန်းများစွာနှင့်ကျန်ရစ်သည်။ ငါ့ကို ဘာလုပ်ဖို့ ဖမ်းထားတာလဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံထိတောင် ခေါ်လာတာအကောင်းတော့ မဟုတ်နိုင်မှန်းသိသည်။
ခဏကြာတော့ ခြေသံနှင့်အတူ “မင်းဟာမင်း စားလို့မရဘူး၊ ငါခွံ့ကျွေးမယ်။ စကားမများနဲ့.. ဘာမှမမေးနဲ့။ ငါကမင်းကို ပို့ပေးရတာကလွဲရင် ဘာမှမသိဘူး။ သိလည်းမသိချင်ဘူး”
စကားသံက ပြတ်သည်။ ဘာမှနောက်ထပ်မပြောတော့ ။ ခဏနေတော့ မိမိကို ဆွဲထူပေးသည်။
မိမိထိုင်လျက်ဖြစ်သွားတော့ ပါးစပ်ဝသို့ တစ်ခုခုလာတေ့ပေးသည်။
“စားလိုက် ပေါင်မုန့်”ဟုသာ ပြောသည်။ ပိုးလေးလည်း ဗိုက်ဆာနေ၍ စားလိုက်သည်။
ပေါင်မုန့်ကုန်သွားတော့ ရေတစ်ခွက် တိုက်သည်။
“မင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး”ဟု ပြောသံကြားပြီး နှာခေါင်းဝတွင် စူးစူးဝါးဝါး အနံ့ကြီးဝင်လာကာ လောကကြီးနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့သည်။
မထင်ထားသော ဘဝငရဲ ၂
ကျွန်မ သတိပြန်ရရခြင်း ခံစားလိုက်မိတာက အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ မျက်လုံးဖွင့်လိုက်သည်။
ကျိန်းစပ်နေသဖြင့် ပြန်မှိတ်လိုက်မိသည်။ နောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖွင့်လိုက်သည်။
သူမရောက်နေတာက အခန်းထဲမှာ။ အခန်းဆိုတာထက် အလုံပိတ်ထားသော သေတ္တာအကြီးစားပုံစံ။
ပတ်ပတ်လည် နံရံများသာ ကာရံထားပြီး ထောင့်တစ်နေရာတွင် တံခါးပေါက်တစ်ခု။
တံခါးဟုသာပြောရသော်လည်း အပေါက်က ပေါင်လည်လောက်သာမြင့်သည်။ မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်
အလုပ်ယူနီဖောင်းဖြစ်သော စကတ်အကြပ်က ပေါင်ရင်းမရောက်တရောက် တွန့်တက်နေသည်။
အပေါ်ပိုင်းက မိန်းကလေးရှပ်အင်္ကျီကိုယ်ကျပ်နှင့်၊ အပေါ်ရုံ ကုတ်မရှိတော့။ အချည်အနှောင်တော့
ဘာမှမရှိ။ မျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်တော့ အခန်းထောင့် တစ်နေရာမှ ကင်မရာကိုမြင်သည်။ CCTV
ကင်မရာလေး။ ဒါဆိုပိုးလေး သတိရတာ သိပြီပေါ့။ အတွေးပင် မဆုံးလိုက်၊ တံခါးပွင့်သွားပြီး
“ကောင်မလေး.. သတိရရင် အပြင်ထွက်ခဲ့..” အသံက မာထန်နေသည်။
မြန်မာမိန်းမတစ်ယောက်၏စကားသံ ပီသစွာကြားလိုက်ရ၍ အားအနည်းငယ်တက်သွားသည်။ သို့သော်
ကြာရှည်တော့မဟုတ် “မကြားဘူးလား။ မြန်မြန်လာစမ်း.. အသားနာချင်လို့လား..”ဟု ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်
အမြန်ထလိုက်ပြီး တံခါးနား လျှောက်သွားလိုက်သည်။ တံခါးဆီရောက်တော့ လေးဘက်ကုန်းပြီး
“ရွှမ်း..အား..အမလေး..” အပြင်ဘက်သို့ တကိုယ်လုံးပင် မရောက်သေး၊ ကျောပြင်သို့ကျရောက်လာသော
ရိုက်ချက်ကြောင့် လန့်ဖျန့်သွားသလို ကျောတွင်လည်း ပူခနဲ ခံစားမှုနှင့်အတူ နာကျင်သွားသည်။
“ဒီမှာ အမိန့်မနာခံရင် ဒီလိုပဲခံစားရမယ်။ ဒါက အမြည်းပဲရှိသေးတယ်။ ကြားလား..”ဟူသော အသံကို
တဆက်တည်းကြားလိုက်ရသည်။ လူက အပြင်ရောက်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ရုတ်တရက်
“ဖြေလေ..မကြားဘူးလား..” စကားသံနှင့်အတူ ကြာပွတ်ရိုက်ချက်က ကျောပေါ်ရောက်လာ၍
“အဲ့လို လိမ္မာစမ်းပါ..ငါ့နောက် လိုက်လာခဲ့..”ဟု ပြောကာ လှည့်ထွက်သွားသောမိန်းမ၏နောက်မှ
အခန်းတစ်ခုရှေ့အရောက် ခြေလှမ်းများရပ်သွားကာ သူမဘက်လှည့်ရင်… “ အဝတ်တွေချွတ်ပြီး
အထဲဝင်သွားလိုက်။ မင်းကို ရေချိုးပေးမယ်..”ဟု ပြောကာ တံခါးဖွင့်နေသည်။ သူမလည်း
အဝတ်တွေချွတ်လိုက်သည်။ မိမိမှာ အခု အသက်၂၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း လိင်မှုကိစ္စမှာ
အတွေ့အကြုံနည်းသည်။ သုံးလေးခါသာ အလိုးခံဖူးသေးသည်။ ထို့ကြောင့် အပျိုစင်လေးလို လှပနေသည်။
ရင်သားမှာ ၃၄လက်မရှိ၍ ဖွံ့ထွားသည်။ သို့သော် တင်းရင်းနေတုန်း၊ ခါးမှာလည်း ၂၃လက်မဖြစ်၍
သေးကျဉ်သည်။ တင် ၃၆ ကလည်း ယောက်ျားလေးများအတွက် မက်မောစရာဖြစ်နေသည်။
ပိုးလေးရှက်သော်လည်း ကြာပွတ်နှင့် အရိုက်ခံရမှာကြောက်၍ အထွန့်မတက်ရဲပေ။
“မင်းကလှသားပဲ၊ ကဲ..အထဲဝင်။ အဝတ်တွေ ငါ့ကိုပေး..”ဟု ဆိုသဖြင့် အဝတ်များပေးကာ အထဲသို့ မရဲတရဲ
ဝင်လိုက်သည်။ လက်ကတော့ အမွှေးနုနုလေးများ ပေါက်ကာစ အဖုတ်လေးကိုတဖက်၊
တင်းတင်းရင်းရင်းနှင့် လုံးဝန်းကာ ဖြူဖွေးနေသောနို့နှစ်လုံးကို အုပ်ထားလိုက်မိသည်။ အထဲတွင်
ရေပိုက်များမှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဝင်လာသည်။ အတွင်းခံ
ပင်တီအနက်ရောင်လေးမှလွဲ၍ ဘာမှမပါ။ လက်တွင်လည်း သံကြိုးနှင့်။ သို့သော် သံကြိုးမှာ
တဖက်နှင့်တဖက်အဆက်မှာ ရှည်သဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ ထိုသံကြိုးမှာ ခြေထောက်မှ
သံကြိုးနှင့်ဆက်ထားပြန်သည်။ ခြေထောက်မှသံကြိုးမှာလည်း လက်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၍
လမ်းလျှောက်လို့ရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တော့ အရှိုးရာများ ပြည့်နေသည်။ ပါးစပ်မပိတ်ထားသော်လည်း
တစ်ခွန်းမှ မပြော၊ မျက်လုံးကတော့ စိတ်မကောင်းဟုပြောနေသယောင်…
အကဲခတ်၍မဆုံးမီ ပထမမိန်းမဝင်လာကာ “ဘာလုပ်နေတာလဲ ရေချိုးပေးလိုက်လေ။ နင်က
ဒီလောက်ရိုက်တာတောင် အသုံးကျမလာဘူး ညကျရင် အပြစ်ပေးရမယ်..ရွှမ်း..ရွှမ်း” ပြောလည်းပြော၊
ရိုက်လည်းရိုက်လိုက်သဖြင့် ကောင်မလေး အော်သံနှင့်အတူ ရေပိုက်ကို ကမန်းကတန်း ကိုင်လိုက်သည်။
“အား..ကြောက်ပါပြီ၊ အပြစ်တော့မပေးပါနဲ့၊ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း သေချာလုပ်ပါ့မယ်ရှင့်..”
မျက်ရည်များစီးကျလာကာ တောင်းပန်နေသည်။ လက်ကလည်း ရေပိုက်ခေါင်းကို ကိုင်ကာ
ခလုတ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်သည်။ ရေပိုက်မှရေများပန်းထွက်လာကာ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အေးသွားသည်။
ရေချိုးပြီးသောအခါ မိန်းမကြီးက သဘက်တစ်ထည်ပစ်ပေးကာ “မင်းသွားတော့.. လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်၊
ပြီးရင် ကြမ်းတိုက်ထား၊ အပြစ်ပေးမခံချင်ရင် ကြမ်းသေချာတိုက်၊ မပြောင်ရင်တော့
သေဖို့သာပြင်ထား..”ဟုပြောလိုက်သဖြင့် ကောင်မလေးခမျာ မျက်နှာငယ်ကလေးနှင့် ထွက်သွားသည်။
“မင်းကတော့ သခင်ကြီးနဲ့သွားတွေ့ရမယ်..”ဟု ပြောကာ အဝတ်များကမ်းပေးသည်။ ပိုးလေးလည်း
အဝတ်များယူကာ ပင်တီကိုရှာလိုက်သော်လည်း ပင်တီနှင့်ဘရာစီယာကို မတွေ့သဖြင့် မေးလိုက်သည်။
“အတွင်းခံတွေရောဟင်.. ပြီးတော့ ကျွန်မဘယ်ရောက်နေတာလဲ၊ သခင်ကြီးကရော ဘယ်သူလဲ၊ ကျွန်မကို
ဘာလို့ဖမ်းထားတာလဲ..” သိချင်တာတွေ မေးလိုက်မိသည်။ ဦးနှောက်ထဲ မေးခွန်းများနှင့် ပြည့်နေပေမဲ့
“အတွင်းခံဝတ်စရာမလိုဘူး.. ပေးတာကိုဝတ်။ မင်းရောက်နေတာက ဂျပန်နိုင်ငံက
မြေအောက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ၊ ထွက်ပြေးဖို့တော့ ယောင်လို့တောင် စိတ်မကူးနဲ့..
မြေပြင်ပေါ်ရောက်ရင်တောင် ၅မိုင်ပတ်လည်အတွင်း သခင်ကြီးတပည့်တွေပဲ ရှိတယ်။
သူတို့ဆီရောက်လို့ကတော့ မသေမရှင်ဖြစ်သွားမယ်။ ငါ့နာမည်က မေစီ။ မင်းတို့ကို လိမ္မာအောင်
သင်ပေးတဲ့သူပေါ့။ သခင်ကြီးဆိုတာ ယာကူဇာဂိုဏ်းက ဂိုဏ်းခွဲမှူးတစ်ယောက်၊ နာမည်တော့
မင်းသိစရာမလိုဘူး။ မင်းကို လေ့ကျင့်ပေးပြီးရင် လိင်ကျွန်အနေနဲ့ရောင်းစားဖို့၊ ခုတော့ သခင်ကြီးလိုးတာ အရင်ခံရမယ်..”
ပိုးလေးကြားလိုက်ရသည်က မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သော အသံဟုပင် ထင်သွားသည်။ အလိုးခံဖို့ ရေချိုးရသည်။
ပြီးရင် အလိုးခံဖို့ ရောင်းစားမည်။ အလိုးခံဖို့ လေ့ကျင့်ပေးဦးမယ်တဲ့.. ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးမှာလဲ မသိ။
အတွေးများနှင့်အတူ အဖုတ်ထဲတွင်လည်း ရွှစိထ သွားသည်။ အတွေးပင်မဆုံးလိုက်။ မေစီဟုခေါ်သော
မိန်းမက ကြိုးတစ်ချောင်းယူလာကာ ပိုးလေးလက်ကို နောက်ပြန်ချည်နှောင်လိုက်သည်။
ပူးချည်သည်မဟုတ်၊ လက်တစ်ဖက်သာချည်ပြီး ကြိုးစကို ခါးတွင်ပတ်လိုက်သည်။ တစ်ပတ်ပြည့်သွားမှ
ချည်ထားသောလက်ကို တင်ပါးပေါ်ခါးတွင်နေရာချကာ နောက်တစ်ဖက်ကို နောက်တင်ပါးတစ်ခြမ်းပေါ်တွင်
တင်၍ချည်နှောင်သည်။ နောက်ကြိုးတစ်ချောင်းယူ၍ ဒူးဆစ်အပေါ် ပေါင်တွင် ချည်သည်။
အတင်းဆွဲလိုက်သဖြင့် ပေါင်ပင် နာသွားသည်။ ပိုးလေး ငိုချင်စိတ်နဲ့အတူ မျက်ရည်များစီးကျလာကာ
“ဟိတ်..ငိုမနေနဲ့၊ ငိုသံနောက်ထပ်ထွက်လာရင် ရိုက်ခံရမယ်..” ပြောလည်းပြော
ခွေးလည်ပတ်တစ်ခုကိုလည်း ပိုးလေး လည်ပင်းတွင် ပတ်နေသည်။ မငိုနဲ့ဟုပြောမှ ပိုငိုချင်လာ၍
“မငိုနဲ့ဆိုမှ အသံပိုထွက်လာပါလား.. ငါ့ကိုရွဲ့တာပေါ့..ဟင်။ ကဲဟာ..ရွှမ်း..ရွှမ်း…”
ကြာပွတ်ရိုက်ချက် ၅ချက်လောက် ခံလိုက်ရ၍ ပိုးလေး အတော်နာသွားသည်။ နောက်ထပ်
အရိုက်ခံရမည်ကို ကြောက်ကာ အမြန်ပင် တောင်းပန်နေသည်။ ငိုသံထပ်မထွက်ရဲသော်လည်း
မေစီက လည်ပတ်ကြိုးကို ဆွဲကာထွက်သွားသည်။ ပိုးလေးလည်း နောက်မှ အမြန်လိုက်ရသည်။
ပေါင်ဖျားတွင် ကြိုးတုပ်ခံထားရ၍ မလဲအောင် သတိထားနေရ၍ လည်ပတ်ကြိုးက တင်းတင်းသွားသည်။
အခန်းအတွင်း လူတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်။ အသက်မကြီး၊ ၃၅ နှစ်လောက်သာရှိမည်။ မျက်နှာကတော့
တည်တည်ပင်။ သို့သော် ကြောက်မက်ဖွယ်အသွင်ဆောင်နေသည်။
သခင်ကြီးဆိုသူက မေစီကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး “ကြာလိုက်တာ”ဟု ပြောလိုက်သည်။ အသံက မမာ၊
ပျော့သည်လည်း မဟုတ်။ သြဇာသံ ပါသည်။ အခန်းတွင်း ဟိန်းသွားသလို မေစီမှာ တုန်သွားသည်။
ချက်ချင်း ဒူးထောက်ကာ “ဟို..ဟို.. နည်းနည်းကလန်နေလို့ ကြာသွားပါရှင့်..” မေစီအသက်မှာ
၄ဝဝန်းကျင်လောက်ရှိမည်။ စောစောတုန်းက ကျားမတစ်ကောင်လို ရဲရင့်သလောက်၊ ခုကျတော့
ယုန်တစ်ကောင်လိုဖြစ်သွားသော မေစီကိုကြည့်ရင်း ပိုးလေးမှာ သခင်ကြီးဆိုသူ မည်မျှအာဏာရှိပြီး
ရက်စက်တက်သည်ကိုတွေးကာ လန့်သွားသည်။ သခင်ကြီးဆိုသူကို အစက ဂျပန်လူမျိုးဟု
ထင်မိသော်လည်း မြန်မာစကားသံ ပီပီသသက မြန်မာဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံနေပါသည်။
မေစီမှာ အသံပင် မမှန်။ ဟုတ်..ဟုတ်သာပြောရင်း လက်ထဲက ကြာပွတ်ကို ဒူးထောက်သွားကာ
သခင်ကြီးကို ပေးလိုက်ပြီး နောက်ပြန်ဆုတ်လာသည်။ နေရာပြန်ရောက်သည်နှင့် ကိုယ့်ပါးကိုယ်
ရိုက်နေသည်။ ပိုးလေးလည်း ကြောက်ကြောက်နှင့် လှုပ်ပင်မလှုပ်ဝံ့။ မေစီမှာ ပါးပေါ်တွင်
လက်ရာများထပ်ကာ ပါးစပ်ထောင့်မှ သွေးများပင်ထွက်လာသော်လည်း မရပ်ဝံ့။ အတော်ကြာမှ
“တော်တော့.. မင်းလည်း ပင်ပန်းနေပြီ။ နောက်မဖြစ်စေနဲ့”
“ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..သခင်ကြီး..” မေစီမှာ ခုမှ အသက်ရှုချောင်သွားသလိုဖြစ်ကာ
သက်ပြင်းချရင်း နှုတ်ခမ်းမှ သွေးများသုတ်လိုက်သည်။
ပိုးလေးမှာ ရှက်ရှက်နှင့် ဖြေနေရသည်။ သခင်ကြီးဆိုသူမှာ ခုချိန်ထိ လက်ဖျားနှင့်ပင် မတို့သေး။
“စောက်ဖုတ်ကို မြင်ရအောင် စကတ်ကို ဆွဲတင်လိုက်”
ခုမှ ပိုးလေးသိသည်။ ကြိုးကို ခါးတွင်ချည်ထားသည်မှာ စကတ်ကို မိမိဘာသာ ဆွဲလှန်ရန် ဖြစ်ကြောင်း။
သိရုံနှင့်မပြီး ဆွဲတင်နေရသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး
ကိုယ့်ဖင်ကိုယ်လှန်နေရသည်ဆိုသည့်အသိဖြင့် ရှက်စိတ်ကြီးစိုးလာပြန်သည်။ ရှက်စိတ်ကမွှန်လာသဖြင့်
သခင်ကြီး၏ပထမဆုံးရိုက်ချက်။ ပိုးလေး အင်္ကျီပင် ပြဲသွားကာ ဘယ်ဘက်နို့အုံပေါ်တွင် အနီရောင်
အစင်းလေးထင်သွားသည်။ သွေးပင် စို့သွားအောင် ပြင်းထန်လှ၍ မျက်ရည်များကျလာကာ စကတ်ကို
“မင်း စောက်ဖုတ်က ဖောင်းနေတာပဲ၊ အမွှေးရိတ်ထားတာလား”
“ဟုတ်..ရိတ်ထားပါတယ်” အရိုက်ခံရမည်ကိုကြောက်၍ အမြန်ဖြေလိုက်ရင်း ရှက်စိတ်ကလည်း
“ဟိုဘက်လှည့်လိုက်.. ဖင်ကြည့်ချင်တယ်” ဖင်လှည့်လိုက်ရပြန်သည်။ ကုန်းခိုင်းသဖြင့်
ကုန်းပြလိုက်ရသည်။ “ဒီကိုလာ..ဒူးထောက်ပြီး ငါ့လီးကို စုပ်ပေး။ ဖင်ကို ကော့ထား”ဟု ပြောရင်း
ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ကာ လီးကြီးကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ပိုးလေးမှာ ဒူးထောက်ထားရ၍ သူ့လီးက
မျက်နှာနှင့် တန်းနေသည်။ နည်းတာကြီး မဟုတ်၊ လုံးပတ်က ယောက်ျားတစ်ကိုင်စာလောက်ရှိပြီး အရှည်က
ရလက်မခန့်၊ ဒါတောင် ဇစ်ပေါက်မှ ထုတ်ထားသလောက်ဖြစ်၍ အရင်းမှဆို ၈လက်မခန့်ရှိမည်။ ပိုးလေးမှာ
လီးတခါမှ မစုပ်ဖူး၍ ရွံ့နေသည်။ သို့ပေမဲ့ ကြာပွတ်က ကော့ထားသော ဖင်ပြောင်ပေါ်ကျလာတော့
နာကျင်သွား၍ အသက်အောင့်ကာ စုပ်လိုက်ရသည်။ သခင်ကြီးက ပိုးလေးဆံပင်ကိုဆွဲ
ပါးစပ်ကိုလိုးနေသဖြင့် ပိုးလေး အသက်ပင် မရှုနိုင်။ အာခေါင်ကိုလာထောက်တော့ အန်ချင်လာသည်။
“ဝူ့…အု..အု..” ပါးစပ်အပြည့် လီးစုပ်ထားရပြန်တော့ အန်၍လည်းမရ။ ပိုးလေး ငိုပါပြီ။
တအောင့်လောက်နေတော့ ဆံပင်ဆွဲမကာ လိုးရပ်လိုက်ရင်း…“ကုတင်ပေါ်သွားပြီး ဖင်ကုန်းထားစမ်း”ဟု
ပြောသည်။ ပိုးလေးလည်း အရိုက်ခံရမှာကြောက်၍ ပြောသည့်အတိုင်း ကုတင်ပေါ်တက်ကာ
ကုန်းထားလိုက်သည်။ လက်ကို ချည်ထားသောကြောင့် ဖင်ပူးတောင်းထောင်သလို ဖြစ်နေသည်။ ဖင်ကြားမှ
စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေး ပြူထွက်နေသည်ကို ကြည့်ရင်း…
“နင့်စောက်စိ တောင်နေတယ်မဟုတ်လား.. အလိုးခံချင်နေတယ်ဟုတ်”ဟု မေးလိုက်ရာ ပိုးလေး အမြန်ငြင်းလိုက်သည်။
“မဟုတ်ပါဘူးရှင့်..” ပိုးလေးက ရိုးသားစွာဖြေလိုက်သော်လည်း လိုချင်သည့်အဖြေ မဟုတ်၍ ဒေါသထွက်သွားတာက သခင်ကြီးဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေသော မေစီက ခုမှအမြန်လာပြီး ကြာပွတ်ကို ယူကာ ပိုးလေးဖင်ကို ရိုက်ရင်း…
“ရွှမ်း… ကောင်မ..ဒီမှာ မေးသမျှမေးခွန်းတိုင်း ငြင်းဆန်တဲ့အဖြေမဖြစ်ရဘူး။ နားလည်လား ရွှမ်..ရွှမ်း….”
ပိုးလေးမှာ ဖင်ထောင်ထား၍ ကြာပွတ်ရိုက်ချက်မှာ အဖုတ်အနားသားလေးပါ ထိသွားသောကြောင့်
“သေချာဖြေလေ မေးတာကို သေချာဖြေ”
သခင်ကြီးမှာ မေစီကိုနောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ရင် ပိုးလေး ဖင်ကို လက်ဝါးနှင့် ရိုက်ချလိုက်သည်။
“ဟုတ်.. စောက်စိတောင်ပြီး အလိုးခံချင်နေပါတယ်.ဟင့်..”
“ထားလိုက်တော့.. နောက်ဆို လိုးပေးဖို့ စိတ်ပါလက်ပါတောင်းပန်လာမယ်”လို့ပြောရင်း အဖုတ်ဝတွင်
လီးတေ့ကာ အားကုန်ဆောင့်လိုက်သည်။ နှုးနပ်မှုမရှိသည့်အပြင် ကြိုးတုပ်ထား၍ စိနေသော အဖုတ်ကို
အစိမ်းလိုက်လိုးခံရခြင်းကြောင့် ပိုးလေး အတော်နာသွားသလို အော်ရင်း ဖင်မှာ အရှေ့သို့ ရုန်းလိုက်မိသည်။
သခင်ကြီးက ခါးကို ဖမ်းထားသောကြောင့် ရုန်းမရ။ လီးထိပ်ပင် နာကျင်သွား၍ တစ်ချက်ရပ်လိုက်သည်။
တဝက်သာ ဝင်သေးသည်မို့ ဆက်ထိုးရန် အားယူကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။
ပိုးလေးအော်သံမှာ သခင်ကြီးအတွက် လိင်စိတ်ပိုကြွစေသည်ဖြစ်၍ ဆောင့်လိုးချက်များပြင်းလာသည်။ သိပ်တော့မကြာ၊ စောက်ဖုတ်ကလည်း ဆွဲညှစ်၊ အော်သံတွေကလည်းမဆဲ၊ ငိုသံလေးနှင့် ဖြစ်၍ မကြာခင် လီးထိပ်မှ လရည်များ ပန်းထွက်လာတော့သည်။
မထင်ထားသော ဘဝငရဲ ၃
ပိုးလေး အိပ်ပျော်သွားသည်မှာ မည်မျှကြာသွားသည်မသိ။ အိပ်ယာနိုးသည်နှင့် မိမိဘဝကို ပြန်စဉ်းစားကာ
မျက်ရည်များ ကျလာသည်။ မိမိမှာ တစ်ယောက်တည်းသမား၊ ငယ်စဉ်ကပင် မိဘများဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။
အဒေါ်ဖြစ်သူမှ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားသဖြင့် ဒီလို ——ကုမ္ပဏီတွင် လက်ထောက်မန်နေဂျာ
ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဒေါ်ရှိရာရွာကို ဒီနှစ် သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ပြန်မည်ဟု စိတ်ကူးထားခဲ့သမျှ
ခုတော့…ဟင့်..ဟင့်။ ပိုးလေး တွေးရင်း ဝမ်းနည်းလာသည်။ အခုမိမိမှာ ထားရာနေ၊ စေရာသွား၊
ခိုင်းတာလုပ်၊ ကျွေးတာစား ဘဝမဟုတ်လား။ အတွေးကမ္ဘာထဲ ချာချာလည်နေစဉ် အန်တီမေစီ၏အသံက
သူမကို လက်ရှိဘဝထဲ ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်သည်။
“ပိုးသား၊ မင်းကို ဒီနေ့ ပုံစံသွင်းမယ်။ ငါ့အမိန့်နာခံရင် မင်းသက်သာမယ်၊ ကာမအရသာကိုလည်း
ခံစားရမယ်၊ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့… ရွှမ်း”
ကြာပွတ်ကိုလေထဲမှာ လွှဲလိုက်သည်။ “ကဲ..လာ လိုက်ခဲ့..”ဟု ပြောရင်း လှည့်ထွက်သွားသည်။
ပုံစံသွင်းမည်ဆို၍ ပိုးလေး ကြောက်ပါသည်။ ပုံစံသွင်းမခံရင် အရိုက်ခံရမဲ့ကြာပွတ်ကို
ပိုကြောက်နေသည်အတွက် တိတ်ဆိတ်စွာပင် လိုက်သွားလိုက်သည်။ ပိုးလေးကို ချည်နှောင်ထားမှုများ
မရှိတော့သည့်အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပင် အခန်းများဖြတ်ကျော်ကာ အခန်းကျယ်တစ်ခုအတွင်း
အခန်းတွင်း ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေသော်လည်း မျက်နှာကို မမြင်စေရန် မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသည်။
“ကျားကြီး..ကောင်မလေးကို နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးလိုက်။ ငြင်ငြင်သာသာလုပ်နော်.. သူက လိမ္မာတယ်..”
ကျားကြီးဆိုသူက ဘာမှပြန်မပြော၊ ခေါင်းသာ တစ်ချက်ဆတ်ပြသည်။ ပိုးလေး မှာ
ကြောက်လန့်နေသော်လည်း ရင်ထဲတွင် ပူလောင်နေသည်။
ကျားကြီးက ပိုးလေးကို ခုံပေါ်တွင် ထိုင်ခိုင်းကာ စားပွဲပေါ်မှဆေးထိုးအပ်ကို ယူလိုက်ရင်း “ငြိမ်ငြိမ်နေနော်..
မလှုပ်နဲ့” ဟုပြောလိုက်သည်။ ကျားကြီးဆိုသူ၏အသံမှာ နာမည်နှင့် မလိုက်အောင် နူးညံ့လှသည်ဟု
ပိုးလေးထင်လိုက်မိသည်။ ပိုးလေး လက်ကိုဆွဲ၊ အရက်ပြန်ဆွတ်ထားသော ဂွမ်းနှင့်ပွတ်ပေးလိုက်ရင်း
ဆေးထိုးလိုက်သည်။ ပိုးလေးဦးနှောက်အတွင်း လက်ခနဲဖြစ်သွားကာ “အဲ့ဒါဘာတွေလဲဟင်
ဘိန်းဖြူတွေလား..” ဟုမေးလိုက်သည် ။
ဘိန်းဖြူတော့ ပိုးလေးကြောက်သည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် လူဆိုးတွေက ကောင်မလေးတွေကို
ဘိန်းဖြူထိုးပေးလိုက်ရင် ကောင်မလေးမှာ ဘိန်းဖြူတစ်ခုသာ အသိရှိတော့သည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာ
“ဘိန်း မဟုတ်ပါဘူး.. စိတ်ကြွဆေးပါ။ မင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ”
ပိုးလေး ရင်မောရပြန်ပါသည်။ ခဏကြာတော့ “ပိုးလေး အဝတ်တွေချွတ်လိုက်နော်.. မကြောက်နဲ့”ဟု ပြောကာ
ပိုးလေးအဝတ်များကို ချွတ်လေသည်။ ပိုးလေးမှာ စိတ်ကြွဆေးအစွမ်းကလည်း စပြနေပြီဖြစ်၍
အသိများဝေဝါးစပြုနေရာ ငြင်းဖို့လည်း သတိမရ၊ ရှက်စိတ်လည်း ပျောက်ကွယ်ကုန်သည်။
ကတုန်ကယင်ဖြစ်ကာ အဖုတ်အတွင်း ယားယံသလို ဖြစ်လာသည်။ ထိုသူကလည်း အထာသိဖြစ်၍
ကောင်မလေး ခံချင်လာပြီမှန်း သိသည်။ ထိုကြောင့် သူ၏ဘောင်းဘီချွတ်ကာ လီးကို ပိုးလေးမြင်အောင်
တမင်ကိုင်ပြနေသည်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ပိုးလေးနို့ကို တစ်လှည့်စီ ညှစ်ပေးလိုက်သည်။ ပိုးလေးမှာ
အသိစိတ်အတွင်း အလိုးခံချင်စိတ် တစ်ခုမှလွဲ၍ တခြားမသိတော့။ မျက်စိရှေ့မှာလည်း
လီးတစ်ချောင်းမြင်နေရကာ ထိုလီးကြီးဖြင့် လိုးခံချင်နေသည်။ “အင်း..ဟင့်..အင့် အင့်…” ပိုးလေးမှာ
ကာမစိတ်ပြင်းထန်လာကာ ငြီးသံများပင် ထွက်လာသည်။ ပါးစပ်မှလည်း “ပိုးလေးကို လိုးပါတော့..
ခံချင်နေလို့ပါရှင်၊ မြန်မြန်လိုးပေးပါတော့..”ဟုပင် တောင်းပန်နေမိသည်။ မျက်နှာဖုံးစွပ်လူက ပိုးလေးကို
ခုတင်ပေါ်ခေါ်သွားကာ ပက်လက်နေ၊ ပေါင်ကားထားခိုင်းရင်း စောက်ဖုတ်ကို လက်နှင့် ပွတ်ပေးနေသည်။
ပိုးလေးစောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေတော့ နဂိုတည်းက စိတ်ထနေရာ စောက်ရည်များမှာ ရွှဲနစ်လာသည်။
“ပိုးလေး အရမ်းခံချင်နေပြီ လိုးတော့လေ…လိုးပါတော့..” ပိုးလေးမှာ အလိုးမခံရရင် သေတော့မည့်လူလို
လိုးဖို့တောင်းပန်နေသည်။ မျက်နှာဖုံးစွပ်လူက “ငါ့နာမည်က ထွန်းထွန်းလို့ခေါ်တယ်။ မင်း အလိုးခံချင်လို့
တောင်းပန်နေတဲ့လူ နာမည်တောင် မသိဘဲ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့” လို့ပြောရင်း ပိုးလေး စောက်စိလေးကို
လက်ထိပ်လေးနှင့် တောက်ကစားနေသည်။ ပိုးလေးမှာ စောက်စိမှ ပေးသောခံစားမှုကြောင့်
တွန့်တွန့်သွားကာ ထွန်းထွန်းဆိုသူပြောသော ရင့်ရင့်သီးသီး စကားများကို အလေးယူ မစဉ်းစား၊
သူမ စဉ်းစားမိသည်က လိုးခံရဖို့သာ။
“ကိုထွန်းထွန်းရယ်..ပိုးလေးကို လိုးပေးပါတော့နော်၊ ပိုးလေး လိုးခံပါရစေနော်..”ဟုသာ တောင်းပန်နေမိသည်။
“အင်း..မင်းက တောင်းပန်နေမှတော့ လိုးရတော့မှာပေါ့”ဟု ပြောရင်း လီးထိပ်ကို စောက်ဖုတ်ဝတွင်
တေ့ကာလိုးပါတော့သည်။ ထွန်းထွန်းမှာ လုပ်နေကြမို့ သုတ်ထိန်းနိုင်သည်။ ပိုးလေး မင်းဘယ်နှခါပြီးပြီလဲ
လိုးရင်း မေးလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းမှာ ပိုးလေး ၅ခါလောက်ပြီးသွားပြီမှန်းသိသည်။ သို့သော် စိတ်ကြွဆေး
အရှိန်ကုန်တော့မည်ကို သိ၍ တမင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုးလေးမှာလည်း အသိတရားများ
ပြန်ဝင်လာကာစဖြစ်၍ ရှက်စိတ်လည်း ပေါ်လာသည်။ “၅..၅ခါလောက်ပြီးသွားပါပြီ..” ရှက်စိတ်ကြောင့်
စကားထစ်သွားသည်။ “ငါမောနေပြီ၊ မင်းအပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ပေးဦး”ဟု ပြောကာ
ပက်လက်အိပ်ချလိုက်သည်။ ပိုးလေးမှာ ရှက်လည်းရှက်သည်၊ အမှန်ပြောရရင်
ခံလို့လည်း ကောင်းနေသည်။ ဆေးကြောင့်တော့မဟုတ်၊ ဆေးရှိန်ကုန်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း
ဆက်ခံချင်နေသည်။ ဒါကြောင့် ထွန်းထွန်းပြောသည့်အတိုင်း အပေါ်မှခွထိုင်ကာ ဆောင့်ပေးနေသည်။
ထွန်းထွန်းကလည်း ပိုးလေး စောက်စိလေးကို ပွတ်လိုက်၊ နို့ကိုကိုင်လိုက်နှင့် ဇိမ်ယူလိုးသည်။ စောက်စိနှင့်
နို့ကိုကိုင်ပေးတော့ ပိုးလေး ခံကောင်းကောင်းနှင့် ဆောင့်ချက်များပြင်းလာကာ ငြီးသံပင်ထွက်နေသည်။
ထွန်းထွန်းမှာ လီးကြောများတင်းလာကာ ပြီးချင်လာ၍ အောက်မှ ကော့ကော့ပြီးဆောင့်၊ လက်ကလည်း
ပိုးလေးခါးကိုကိုင်ကာ ဆောင့်ချလိုက်ရာ… လီးမှာ လရည်များ ပန်းထွက်သွားသည်။ ပိုးလေးလည်း
ပြင်းထန်သောဆောင့်ချက်နှင့်အတူ လရည်များကြောင့် ပြီးသွားကာ
မထင်ထားသော ဘဝငရဲ ၄
ပိုးလေးမှာ ကာမအရသာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားလိုက်ရသည်။ ချစ်သူနှင့် လိုးဖူးသော်လည်း ကာမစည်းစိမ် မခံစားခဲ့ရ။ ချစ်သူမှာ သူဘာသူပြီးရန်သာ အားထုတ်ပြီး ခဏသာကြာသည်မို့ ပိုးလေးမှာ ရွရုံသာ ရွပြီး ဘာမှန်းမသိလိုက်။ ခုမှကာမအရသာကောင်းမှန်း သိလိုက်သည်။ ရိုင်းရိုင်းပြောလျှင် လိုးခံရတာ ကောင်းမှန်းသိသွားသည်။
နောက်တစ်ကြိမ် ခံချင်သေးသော်လည်း မေစီဟုခေါ်သော မိန်းမမှ “ကောင်မ. ပြီးရင်လည်းဇိမ်ခံမနေနဲ့…. မင်းကို ဇိမ်လာခံခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး.” ပြောရင်း ပိုးလေး လည်ပင်မှ ခွေးလည်ပတ်ကိုကိုင်ကာ ဆွဲသဖြင့် ပိုးလေးမှ ကမန်းကတန်း ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာ အကျ င်္ီများယူ၍ ပါသွားသည်။
အခန်းထဲပြန်ရောက်မှ အဝတ်များဝတ်ရင်း မိမိ၏ ရှေ့အနာဂတ်အရေး တွေးရင်း ရင်မောရသည်။ တွေးရင်း မိမိကိုလိုးခဲ့သည်ကို တွေးမိပြန်တော့ ရင်ဖိုသလို၊ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှလည်း စိုစိစိ ဖြစ်လာပြန်သည်။ မိမိကို လိင်ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားရန် လေ့ကျင်နေသည်ဟု တွေးမိပြန်တော့ ယူကြုံးမရလည်းဖြစ် ကြောက်လည်း ကြောက်လာသည်။ နေ့ခင်း၊ ညနေ၊ ည အချိန်တွေကုန်လာသည်အထိ ထမင်း လာပို့သည်မှအပ ဘာမှ မထူးခြား။ ဒီ နေရာတွင် မိမိရယ် မေစီရယ် ထွန်းထွန်းဆိုသည့်သူရယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ် သခင်ကြီးဆိုသူမှအပ တခြား သူများကိုမတွေ့။ ထမင်းလာပို့သည်မှလည်း ကောင်မလေးသာဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိသည်။ သံကြိုးနှင့် ကြမ်းပွတ်သံကြောင့် ခန့်မှန်းမိခြင်းဖြစ်သည်။ ထမင်းပန်ကန်နှင့်အတူ ရေတစ်ခွက်ပါပေးသည်။ ရေခွက်မှာ အကြီးမို့လိုသာ တော်သည်. ပိုးလေးမှာရင်တုန်. ရင်ပူနေ၍ ရေသာဖိသောက်နေမိလေသည်။ ရေသောက်များခြင်း၏ ဆိုးကျိုးကိုတော့ ခုမှသိလေပြီ။ အကြောင်းမှာ သေးပေါက်ချင်၍ဖြစ်သည်။ ပိုးလေး အခန်းတွင်း လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်သည် ထမင်းပန်းကန်နှင့် ရေခွက်မှလွဲ၍ ဘာဆိုဘာမျှမရှိ။ ဒုက္ခဟု ရေရွတ်ရင်း တံခါးနားလျှောက်သွားကာ လှမ်းအော်ကြည့်လိုက်သည်။ အခန်းတွင်း၌ မိမိအသံသာ ပဲ့တင်ထပ်သွားသည် … အခန်းအပြင်ဘက်မှတော့ ဘာမှထူးမလာ.. တိတ်ဆိတ်မြဲ။ သေးကလည်းအရမ်းပေါက်ချင်လာသည်… မထူးတော့ မအောင့်နိုင်တော့သည့်အဆုံး အခန်းထောင့်သို့သွားကာ စကတ်မပြီး ပေါက်ချလိုက်သည်။….
ညက နက်သည်ထက်နက်လာသည်။ ပိုးလေးအိပ်မပျော် သေးနံ့ကနှာခေါင်းထဲ စူးစူးဝါးဝါး …ခေါင်းပင်ကိုက်လာသည် အလုံခန်းဖြစ်၍ အနံ့က လှိုင်နေလေသည်။ အချိန်များကုန်ဆုံးလာသည်မှာ မိုးလင်းတော့မည်ကို ပိုးလေး သိလိုက်သည်။ ပိုးလေးမှာ မိုးလင်းသည်နှင့် ဗိုက်နာကာ အိမ်သာတက်နေကျမို့ သိနေခြင်းဖြစ်သည်။ မနေ့ကတော့ မမေစီမှ လာခေါ်သည်မို့ အိမ်သာတက်ရန်ခွင့်တောင်းလိုက်၍ အဆင်ပြေသည်။ ဒီနေ့လည်းလာခေါ်မည်အထင်နှင့် အောင့်ထားလိုက်သည်။ ………. ပိုးလေးမအောင့်နိုင်တော့ … ဗိုက်ကအတော်နာလာ၍ ဇောချွေးများပင် ကျလာသည်။ အပြင်မှလည်း ဘာမှထူးခြားမလား….လှမ်းခေါ်ကြည့်လိုက်သော်လည်း တိတ်ဆိတ်မြဲ….
မအောင့်နိုင်တော့သည့်အဆုံး ညကသေးပေါက်ထားသော နေရာတွင်ပင် ပါချလိုက်လေတော့သည်။
နောက်တစ်နာရီခန့်အကြာ တံခါးဖွင့်သံကြား၍ ပိုးလေးတစ်ယောက် လှဲနေရာမှ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ မမေစီ ကြာပွတ်ကိုင်ကာ ဝင်လာသည် .. မေစီနောက်တွင် ဟိုနေ့ကကောင်မလေး သံကြိုးများကိုင်ကာ ဝင်လာသည်။ “ သူ့ကို သံကြိုးတွေချိတ်ပေးလိုက်…ငါသိသားပဲ . မင်း အညစ်အကြေးတွေ စွန့်မယ်ဆိုတာ.. ဒီနေ့ မင်းကို ကျွန်သင်တန်းပေးမယ်… နားလည်လား ….. ဟုတ်ကဲ့” မေစီမှာ နောက်မှကောင်မလေးအား ခိုင်းရင်း ပိုးလေးကိုပါပြောလိုက်သည်။ ပိုးလေးမှာ ဟုတ်ကဲ့ဟုသာ ပြောရင်း ကောင်မလေးလုပ်သမျှခံရင်း ကြည့်နေသည်။ ခဏကြာတော့ သံကြိုးများ ပိုးလေးကိုယ်ပေါ်တွင် နေရာကျသွားသည်။ လက်နှစ်ဖက် ခြေနှစ်ဖက်ကို သံကြိုးတစ်ချောင်းစီဖြင့် ခတ်ထားပြီး သံကြိုးတစ်ချောင်းမှာ လည်ပင်းကို ပတ်ကာရှေ့တွင် သော့ခလောက်ခတ်ထားသည်။ ထိုသံကြိုးမှ တစ်စကို လက်မှ သံကြိုး ။ ထိုမှ ခြေထောက်ရှိသံကြိုးတို့ကို တစ်ဆက်တည်း ဆက်ထားရာ ပိုးလေးမှ လက်က အပေါ်မြှောက်မရ အောက်ချလို့မရ အနေအထားဖြစ်သွားသည်။
“ မင်းအညစ်အကြေးတွေ အရင်ရှင်း၊ ပြီးရင် အခန်းတွေအားလုံး ကြမ်းတိုက်ရမယ်… အချိန်သတ်မှတ်ပေးမယ်.. သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးရမယ် သေချာရမယ် … မပြီးရင် ကျော်သွားတဲ့ အချိန်အတွက် ၁မိနစ်ကို ၁ချက်နှုန်း ကြာပွတ်စာကျွေးမယ်… မသေချာဘူးဆိုရင်တော့ အချက် ၃၀။ ကိုယ်တုံးလုံး လုပ်ရမယ်။ ဟိုကောင်မ နင်က နေရာနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြပေးလိုက် နင်လုံးဝ မကူညီရဘူး … ကူညီရင် နင်က အချက် ၁၀၀ ပဲ။ ကဲစတော့ … ” ဟုပြောကာ မေစီမှာ လှည့်ထွက်သွားသည်။ ကောင်မလေးက ပိုးလေး အကျ င်္ီကို အရင်ချွတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်သင်တန်း စလေသည်။…
ပိုးလေးမှ လည်ပင်းသံကြိုးနှင့် လက်ကို တွဲထား၍ ဒူးထောက်ကာ ကြမ်းတိုက်ခြင်း လုပ်ရသည်။ ထို့နေ့ ပိုးလေး ငရဲကျလေသည်…. ချီးပါ သေးပေါက်ထားသောအခန်းကို ရှင်း၊ ကြမ်းတိုက်၊ ဖိနပ်တိုက်၊ စသည့် ညစ်ပတ်သော အရာများကို ဖင်ပြောင်ပြောင်ဖြင့် ကုန်းကာ လုပ်ရသည်။ ဒီတော့မှ ပိုးလေးသိသည်မှ အခြားမိန်းကလေး ၄. ၅ယောက်လည်း ရှိ၍ သူတို့လည်း မိမိနှင့် ဘဝတူတွေမှန်းသိရသည်။ တစ်နေကုန် ချွေးမြေကျ လုပ်သော်လည်း သတ်မှတ်ချိန်ထက် ၁၈ မိနစ်ပိုသွားသည်ဆို၍ ၁၈ချက်၊ ကြမ်းများမပြောင်၍ ၃၀… စုစုပေါင်း ၄၈ချက်ကို ခြေကား လက်ကား ချည်နှောင်၍ အရိုက်ခံ ရသည်။ ပိုးလေးတစ်ကိုယ်လုံး ကြာပွတ်ရာများ သွေးများစို့နေအောင် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခံရကာ တစ်နေ့ကုန်သွားလေတောသည်။….
မထင်ထားသော ဘဝငရဲ (၅)
ပိုးလေး ထိုည ပင်ပန်းမှုဒဏ်၊ နှိပ်စက်ခံရမှု ဒဏ်တို့ကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပင် အိပ်ပျော်သွားသည်။ မနက်စောစော ပိုးလေးပင်မနိုးသေး မေစီတစ်ယောက် ပိုးလေးထားရာ အခန်းသို့ ဝင်လာသည်။ “ ဟိတ်. ကောင်မ ထစမ်း..” ဟုပြောလည်းပြော ခြေထောက်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကန်လိုက်သည်။ အကန်ခံလိုက်ရသဖြင့် ပိုးလေးတစ်ယောက် လန့်နိုးသွားသည်။ ကမန်းကတန်းထကာ မေစိကိုကြည့်လိုက်ရာ လက်ကိုင်ပါသော သံပုံးတစ်ပုံးကို ပိုးလေးလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ကာ “ နင် ဒီထဲမှာပဲ ချီးပါ သေးပေါက်လုပ်… ကြမ်း ညစ်ပတ်တယ်… ကြားလား..” ”ဟုတ်ကဲ့… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” မေစီ အမေးကို ပိုးလေး ဖြေလိုက်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ ပြောလိုက်သည်။ ပိုးလေး တကယ်ပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မိမိလည်း ကြမ်းပေါ်တွင် ချီးပါ သေးပေါက် မလုပ်ချင်… မိမိ နေရသည်က လေလုံခန်း… အနံ့ဆိုးဆိုးတွေ ကအပြင်မထွက် .. အပြင်မထွက်သည်ထက်ပင် … မိမိစွန့်ထားသည်များကို ပြန်မြင်နေရသည်မှာ အော့အန်ချင်စိတ်ပင် ဖြစ်သည်။ တကယ်ဆိုးရွားသည်… ထို့ကြောင့် သံရေပုံး ပေးခြင်းကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်သွားကာ မိမိကို နှိပ်စက်ထားသည်ကိုပင် မေ့သွားကာ ကျေးဇူးစကားဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
နိုးသွားသည့်အတွက် ပိုးလေး ပြန်အိပ်မပျော်တော့… ခဏအကြာ ပိုးလေးဗိုက်နာလာ၍ ရေပုံဆီသွားကာ အလေးစွန့်သည်။ “ ရှီး.ရှီး.ရှီး………” ပိုးလေး သေးပေါက်သံက အလုံခန်းလည်းဖြစ် သံပုံးလည်း ဖြစ်၍ အသံအတော်လေး ကျယ်သွားသည်။ ပိုးလေး ရုတ်တရက်ဖြစ်၍ ထွက်ကာစပင် ရပ်မိသွားသည်။ ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်ပြန်လွှတ်သည်။ ကျင့်သားမဖြစ်၍ တွန့်သွားပြန်သည်။ နောက်မှ စိတ်လျော့ကာ အကုန်လွှတ်လိုက်သည်။ (– မိတ်ဆွေတို့လည်း ဖြစ်ဖူးမှာပါ… တွန့်.တွန့်သွားတာလေ—စကားကြွင်း) တစ်နာရီခန့် အကြာမှ မနက်စာနှင့် ရေလာပို့သည်။ တစ်မနက်လုံး ပိုးလေး ဘယ်အချိန် ခေါ်၍ နှိပ်စက်မလဲ တွေးရင်း ဂနာမငြိမ် .. နေ့ခင်းပိုင်းပင် ရောက်လာသည်။ မည်သူမှလာမခေါ်၍ ဒီနေ့ ပေးနားထား၍ နောက်နေ့မှ ပေါင်းနှိပ်စက်မည်လားတွေးရင်း လန့်နေသည်။ နေ့လည်လောက်တွင် ကောင်မလေး တစ်ယောက် ထမင်းလာပို့သည်။ ထိုကောင်မလေးကို ပိုးလေး သိသည်။ မနေ့က မိမိထမင်းပို့ပေးခဲ့ရသော ကောင်မလေး ဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးက ထမင်းပို့ရင်း ပိုးလေးအား လက်ယက်ခေါ်သည်။ ပိုးလေး အနားရောက်သွားသောအခါ “ အမက အသစ်နဲ့ တူတယ်.. ခိုင် အမကို မနေ့ကမှတွေ့လို့… “ဟု တိုးတိုးလေးမေးသည်။ ပိုးလေး ဝမ်းသာသွားသည်။ ပိုးလေး စရောက်သည့် အချိန်မှစ၍ မေစီ၊ သခင်ကြီးဆိုသူ၊ ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့သော ကောင်မလေးနှင့် ထွန်းထွန်းဟုခေါ်သော မျက်နှာဖုံးနှင့် လူတို့သာ စကားပြောဖူးသည်။ သခင်ကြီးဆိုသူကလည်း မိမိကို လိုးရန် စောက်ဖုတ် ပါးစပ် ပါသည့် အရုပ်ကဲ့သို့ “လီးစုပ် ဖင်ကုန်း” စသည့် သံပတ်ပေးသော စကားသာပြောသည်။ မေစီဆိုလည်း “ဟိုလိုလုပ်စမ်း၊ ဒီဟာလုပ်စမ်း၊ ကြာပွတ်စာမိချင်လား”ဖြင့် ကျွန်မ တစ်ယောက်လိုသာ ဆက်ဆံလေသည်။ ကောင်မလေးမှာလည်း မေစီ ပြောခိုင်းသည့်စကားမှလွဲ ပိုမပြော.. မေစီအား အလွန်ကြောက်ပုံရသည်။ ကြောက်မည်ဆိုလည်း ကြောက်စရာ မနေ့တနေ့ကမှ ရောက်သည့် ပိုးလေးပင် မနေ့ကတစ်ရက် နှိပ်စက်ခံရရုံဖြင့် တွေ့ပင်မတွေ့ရဲတော့…. သွေးထွက်အောင်အရိုက်ခံခဲ့ရသည့် ဖင်မှာအရှိုးရာများ ထပ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်လား။ ထွန်းထွန်းဆိုလည်း စိတ်ကြွဆေး အစွမ်းဖြင့် ပိုလေးမှ လိုးပေးရန် တောင်းဆိုသည်မှလွဲ၍ မပြောဖူး။ “ဟုတ်တယ် ညီမလေး” ပိုးလေး လေသံဖြင့် ဖြေသည်။ “ညီမနာမည်က ၀ါဝါခိုင်.. အမကရော..”…“ပိုးသားပါ … ညီမ အဖမ်းခံရတာကြာပြီလား… ညီမသိတာတွေ ပြောပြပါလား ..” ပိုးလေး သိချင်တာမမေးတော့ မေးလည်း မထူး ကောင်မလေး သိသမျှ ပြောပြရန်သာတောင်းဆိုလိုက်သည်။ “ ညီမ ဒီရောက်တာ ၂ပတ်ရှိပြီ အမ… ဒီကိုရောက်တာ ငရဲ ရောက်တာနဲ့ အတူတူပဲ။ တစ်နေ့တစ်မျိုး နှိပ်စက်တယ်… ဟို မိစ္တာမကြီးက အရမ်းရက်စက်တယ်… ညီမရောက်ထဲက ခုထိ အဲ့မိစ္တာမ ရိုက်တာ မခံရတဲ့နေ့ မရှိဘူး… ဟိုကောင်မလေးဆို ဟိုတစ်ခါက ရိုက်တာမှ ကြောက်စရာကြီး ကောင်မလေး လက်နှစ်ဖက်ကို တိုင်လုံးနဲ့ကားချည်ပြီး လေထဲဆွဲထားတာ…ခြေထောက်နှစ်ခြောင်းကိုလည်း တုတ်ချောင်းခံပြီး ကားချည်ထားသေးတယ်…. မလည်အောင် တုတ်ချောင်းကို တိုင်နဲ့တွဲချည်ပြီးရိုက်တာ … ဘယ်ကိုရိုက်တာ ထင်လဲ …. ကောင်မလေးရဲ့ အဖုတ်ကို အောက်ကနေ ရာဘာအပြားထိပ်မှာတပ်ထားတဲ့ တုတ်နဲ့…. ကောက်မလေးခမျာ တစ်ချက်ရိုက်တိုင်း .အော်အော်ပြီးငိုတာ… ပေါင်ကားထားရတော့ အဖုတ်ကဖြဲထားသလိုဖြစ်.. ဒီတော့ အစိလေးက ပြူနေတယ်လေ…. ရိုက်တာ အစိထိတော့ နာလိုက်မဲ့ ဖြစ်ချင်း …. ခိုင်ကြောက်ပြီး သေးပါထွက်တယ် …. ကောင်မလေးဆို သေးထွက်တာ မေစီပါကိုပါ စိုသွားတယ်… ဒါကြောင့်ပိုရိုက်တာ ဖြစ်မယ်.. အဲ့တုန်းက ဖမ်းထားခံရတဲ့ ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံးကို ပြောစကားနားမထောင်ရင် ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ထားကြ ဆိုပြီး အားလုံးကို ကြည့်ခိုင်းတာ..ဘယ်နှချက်ရှပြီဆိုတာပါ ရေခိုင်သေးတယ်… အဖုတ်က်ုပဲ ၂၅ချက် ပေါင်တစ်ဖက်ကို ၂၅ချက်၊ ခြေသလုံးတစ်ဖက် ၂၅ချက်၊ ဖင်ကို အချက်၅၀၊ တုတ်နဲ့ ကျောကိုကျ ကြာပွတ်နဲ့ ၃၀… မိုးလင်းကစရိုက်တာ နေ့လည်ထိပဲ…. ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို ဒူးထောက်ခိုင်းထားတာ ဘယ်အချိန်မှ နားရလဲမသိဘူး… မနက်စာလဲ မကျွေးဘူး…. ကောင်မလေး ၂ရက်လောက် ပျောက်သွားတယ်…” ပိုးလေး အရမ်းလန့်သွားသည် … ဒီနေ့ မိမိကို နားခိုင်းပြီး နောက်နေ့မှ အဲ့လိုရိုက်ဖို့လား ဟုတွေးကာ တုန်သွားတော့ ခိုင်က “ ဘာဖြစ်တာလဲ အမ” ဟုမေးသည်။ ပိုးလေးလည်း ဒီနေ့ မိမိကို ဘာမှ မလုပ်သေးကြောင်း၊ နောက်မှ ခဏကလို ရိုက်မှာလားလို့တွေးမိလို့ ဟုပြောပြရာ ခိုင်က “မဖြစ်နိုင်ဘူးအမ ခိုင်ရောက်ထဲက အဲ့လို မရိုက်ဘူး… ” ဟုပြောမှ စိတ်သက်သာရ.ရသည်။ သို့သော် လုံးဝတော့ အကြောက်မပြေသေး.။ ခိုင်က ဆက်ပြောသည် “ ခိုင်ကြားတာ ခိုင်တို့ကို ရောင်းတော့မယ်တဲ့ ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာလို့ကြားတယ်” ပိုးလေး သိပြီးသား ဖြစ်သော်လည်း ဒီလောက်မြန်မယ်မထင်ခဲ့..“ဘယ်လို ရောင်းမှာလဲ ဟင် ညီမ” “ခိုင်တို့ကို စင်ပေါ်တင်ပြီး ဝယ်သူတွေ လုပ်ခိုင်းတာကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လုပ်ပြခိုင်းတယ် … ဝယ်သူက ကြိုက်တဲ့သူဝယ် …… နောက်ဆုံး ဝယ်မဲ့သူ မရှိတဲ့အထိ ရောင်းတယ်တဲ့” …“ညီမကို ဘယ်သူပြောပြတာလဲ” ပိုးလေးမှာ “တဲ့” ဆိုသောကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ပြောပြသည်ကို သိ၍ မေးလိုက်သည်။ “ ဟိုဘက်မှာ အမတစ်ယောက်ရှိတယ် …သူက အရင်တစ်ခါရောင်းတုန်းက ဘယ်သူမှ မဝယ်လို့ ကျန်ခဲ့တာတဲ့ သူပြောပြတာ” ပိုးလေး ဝယ်တာ ဘယ်သူတွေလဲ မေးရန် ပြင်လိုက်စဉ် “ အမ ခိုင်းသွားတော့မယ် တော်ကြာ ကြာလို့ဆိုပြီး ရိုက်ဦးမယ်” ဟုပြောကာ ကမန်းကတန်းထွက်သွား၍ မမေးလိုက်ရ.။ပိုးလေး ထမင်းစားပြီး ဟိုးတွေး ဒီတွေးနှင့် အိပ်ပျော်သွားသည်။ ပိုးလေးနိုးတော့ ထမင်းပန်ုးကန်တွေ့သည်။ ဘယ်တုန်းက ထမင်းလာပို့သွားသည်ပင် မသိလိုက်။ ထပြီး ရေသောက် … သေးပေါက်လုပ်ပြီး အညောင်းပြေ လမ်းလျှောက်နေလိုက်သည်။ အတော်ကြာမှ “အားရှိအောင် ထမင်းစားမှ” ဟု ရေရွတ်ကာ ထမင်းစားလေသည်။ ဒီနေ့တော့ ဘာမှ မလုပ်လောက်တော့ပါဘူးဟု စိတ်ဒုံးဒုံးချ လိုက်သည်။….
ပိုးလေးအား ၂ရက်အတွင်း လိင်ကျွန်ဖြစ်စေရန်…
လူအများ ၀ိုင်းကြည့်နေသော စင်ပေါ်တွင် ခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်ပြစေရန်….
တစ်ရက်လုံး ပေးနားထားသည့်အကြောင်းရင်း….. တို့ကို ဇာတ်သိမ်းပိုင်းတွင် ဆက်လက်ရှုစားကြပါ နော်….
( ခုတော့ ၂နာရီထိုးပြီးပြီမို့ မျက်လုံး မပွင့်တော့ဘူး……. ကြိုးစားလျှက် မိုးထက်မြင့်)
မထင်​ထား​သော ဘဝငရဲ (ဇာတ်​သိမ်း)
အချိန်​က ​ဝေလီ​ဝေလင်း.... ပိုး​လေး အိပ်​​ပျော်​​နေ​သောကာလ....
ရွှမ်း....ကြာပွတ်​ရိုက်​ချက်​က ပိုး​လေး​ကျော​ပေါ် ကျ​ရောက်​လာသည်​။ ပိုး​လေး အလန့်​တကြား ကုန်းထပြီ ​မော့ကြည့်​လိုက်​​တော့ အန်​တီ​မေစီ ကြာပွတ်​ကိုကိုင်​ကာ ပိုး​လေးကို ကြည့်​​နေသည်​။
ကဲ…​ကောင်​မ​လေး ဇိမ်​ကျ​နေတယ်​​ပေါ့….. ဟုတ်​လား ထစမ်း…​..လာ ငါ့​နောက်​က လိုက်​ခဲ့…
ပိုး​လေး အိပ်​​နေရာမှ ထကာ အန်​တီ​မေစီ ​ခေါ်​ဆောင်​ရာသို့ လိုက်​သွားသည်​။ ​အခန်းကျယ်​ကြီး တစ်​ခုထဲအ​ရောက်​…ရုတ်​တရက်​ မီးများ လင်းထိန်​သွား၍ ပိုး​လေး မျက်​လုံးကျိန်းသွားကာ မျက်​လုံးမှိတ်​လိုက်​သည်​။ စက္ကန့်​ပိုင်း​လောက်​ကြာ​တော့ မှိတ်​ထား​သော မျက်​လုံးများကို ​ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်​လိုက်​သည်​။
ပိုး​လေး မျက်​လုံးအနည်းငယ်​ ပြူးကျယ်​သွားသည်​။ ဟုတ်​သည်​​လေ မျက်​နှာဖုံးစွပ်​ထား​သော လူ​လေး​ယောက်​က မိမိ​ရှေ့မှာ ထိုင်​​နေသည်​။
မိမိမှာ အဝတ်​မပါ…ကိုယ်​တုံးလုံးချွတ်​နှင့်​ဆို​တော့ အ​တော်​ရှက်​ဖို့ ​ကောင်း​နေသည်​။ အန်​တီ​မေစီက ထိုင်​ခုံတစ်​ခုထိုင်​ခိုင်းသည်​။ ထိုင်​ခုံမှာ ​အောက်​မှအ​ပေါက်​​ဖောက်​ထားသည်​။ ​အ​ပေါက်​မှ လီးတုတစ်​​ချောင်းတပ်​ထားသည်​။ လီးတုမှ ​မော်​တာနှင့်​တွဲထားသည်​။ ပိုး​လေး ထိုင်​ခုံမှာ ထိုင်​လိုက်​သည်​။ အန်​တီ​မေစီက ထိုင်​ခုံနှင့်​ ပိုး​လေးကို တွဲချည်​သည်​။ လက်​​နောက်​ပြန်​ ထိုင်​ခုံ​အောက်​​ခြေနှင့်​ ချည်​၍ ​ခြေ​ထောက်​ကို ကားကာ ဒူးကို​ကွေး​စေ၍ ​​ခြေချင်းဝတ်​ကို ချည်​​နှောင်​ပြီး ကျန်​ကြိုးစကို ထိုင်​ခုံ​နောက်​မှီကို ဆွဲချည်​လိုက်​ရာ ပိုး​လေး​ခြေအစုံမှာ ကြမ်းပြင်​နှင့်​မထိ​တော့ဘဲ ခါး​ကော့ထားသည့်​ပုံစံ ဖြစ်​သွားသည်​။
မော်​တာတပ်​ လီးတုက ပိုး​လေး အဖုတ်​ထဲ၌ ပြည့်​ကျပ်​​နေသည်။
ထို့​နောက်​ အန်​တီ​မေစီက လက်​ကိုင်​ပါ ထိပ်​ဘုလုံးနှင့်​ တုန်​ခါစက်​​လေးကို ပို​လေး အဖုတ်​​အောက်​ထိုးသွင်းလိုက်​သည်​။ ပိုး​လေးတွန့်​သွား​ပေမဲ့ ကြိုးက တင်းလွန်​၍ လှုပ်​မရ​ပေ....တုန်​ခါဘုလုံး​လေးက ပိုး​လေး အစိကို မိမိရရ ထိကပ်​​နေသည်​။ မျက်​နှာဖုံးစွပ်​နှင့်​ လူ​တွေမှာ ပိုး​လေးကို စူးစူးရဲရဲစိုက်​ကြည့်​​နေသည်​။ ​အန်​တီ​မေစီက တုန်​ခါစက်​မှ ခလုတ်​​လေးကို နှိပ်​လိုက်​ရာ
တုန်​ခါသံနှင့်​အတူ…ပိုး​လေး ငြီးငြူသံက ကျယ်​​လောင်​စွာ ထွက်​​ပေါ်လာသည်​။ အန်​တီ​မေစီက လီးတုတပ်​ဆင်​ထား​သော ​မော်​တာခလုတ်​ကိုပါ ဖွင့်​လိုက်​ရာ ပိုး​လေးမှာ ကာမစည်းစိမ်​ ရရှိသွားသည်​။
အချိန်​က ခဏ​လေး…သို့​သော်​ ပိုး​လေးမှာ တုန်​စက်​ဒဏ်​​ကြောင့်​ အ​တော်​ပင်​ ​ကောင်း​နေရာ ​ခြေလက်​များပင်​ ​တောင့်​တင်းလာပြီး…..
အား...ဟ..ဟ အာ့.. ​တော်​ပါ​တော့ ရပ်​​ပေးပါ​တော့...မခံစားနိုင်​​တော့လို့ပါ....အင့်​..ဟင်​....
ပိုး​လေး ​တောင်းပန်​သံ​ကြောင့်​ ​မေစီ အပြုံးတစ်​ချက်​ ပြုံးလိုက်​ပြီး… လီးတုတပ်​​မော်​တာကို ရပ်​ကာ လီးတုကို ပ်ိုး​လေး အဖုတ်​ထဲမှ ဆွဲထုတ်​လိုက်​သည်​။ တုန်​ခါစက်​ကို​တော့ မပိတ်​ဘဲ တုန်​ခါသည့်​အရှိန်​ကို ပိုမြှင့်​သည့်​ ခလုတ်​ကို နှိပ်​လိုက်​သည်​။
တုန်​ခါသံက အသံပို​ကျယ်​​လောင်​လာသလို ပိုး​လေး ခန္တာကိုယ်​မှာ ပိုတွန့်​လိမ်​သွားသည်​။ အဖုတ်​ထဲမှ အရည်​များလည်း ထိုင်​ခုံမှ ​အ​ပေါက်​မှ ​အောက်​သို့ ကျ​နေရာ ကြမ်းပြင်​မှာ ​စောက်​ရည်​များရွှဲ ​နေသည်​။
အ…ဟ..ဟင့်​..ဟင့်​…​သေပါပြီး.ရှင်​…လိုးပါ​တော့. ပိုး​လေး ကိုလိုး​ပေးပါ​တော့​နော်​…အဖုတ်​ထဲမှာ အရမ်းယား​နေပြီ….လိုးပါ​တော့….
ပိုး​လေး အသဲအသန်​ပင်​ လိုးရန်​​တောင်းပန်​​နေ​တော့သည်​။ ပိုး​လေးကို တမင်​ပင်​ နှိပ်​စက်​ထားခြင်းဖြစ်​၍ ရပ်​​ပေးဖို့​တော့ မစဉ်းစားပဲ ထိုင်​ကြည့်​​နေသည်​။
ပိုး​လေး အဖုတ်​ထဲမှ အရည်​များလည်း ကြမ်းပြင်​​ပေါ်တွင်​ ရွှဲရွှဲစိ​နေပြီး… ပိုး​လေးမှာ ​အော်​ပင်​မ​အော်​နိုင်​​တော့….. ​ကာမပန်းတိုင်​သို့ အကြိမ်​ကြိမ်​တက်​လှန်းပြီး ဖြစ်​​သော်​လည်း ကာမအရှိန်​က​လျော့မသွားပဲ ပို၍သာတိုးလာသည်​။..
ရပ်​​ပေးပါ​တော့...​နော်​ ပိုး​လေး အရမ်းအလိုးခံချင်​​နေပါပြီ.....ခိုင်းတာလုပ်​ပါ​မယ်​... ရပ်​​ပေးပါ​တော့...​နော်​..
​မင်း​ပြောသလို ခိုင်းတာလုပ်​မယ်​ဆိုရင်​ ရပ်​​ပေးမယ်​…ဒါ​ပေမဲ့ အာခံရင်​​တော့ ဒီထက်​ပိုခံစားရမယ်​… ကြားလား…​ကောင်​မ..
အန်​တီ​မေစီ ခလုတ်​​ပိတ်​ပြီး… ကြိုးများ​ဖြေ​ပေးလိုက်​သည်​။ ပိုး​လေး မတ်​တပ်​ထရပ်​လိုက်​​သော်​လည်း ​​ခြေ​ထောက်​မှာ ​ပျော့​ခွေကာ ကြမ်းပြင်​သို့ ပုံလျက်​သား လဲကျသွားသည်​။ အဖုတ်​ရည်​များစွာ ထွက်​ထား၍ အားကုန်​သလို ဖြစ်​​နေသည်​။
​ကောင်​မ အနားယူမ​နေနဲ့ ထစမ်း…. ​လေးဘက်​​ထောက်​ပြီး ဟိုကလည်​ပတ်​ကို သွားယူလာခဲ့… ပိုး​လေး အနိုင်​နိုင်​ပင်​ ​လေးဘက်​​ထောက်​ပြီး ​ခွေးလည်​ပတ်​​လေး ရှိရာသို့ သွားရသည်​။ ​
လည်​ပတ်​​လေးကို လက်​ဖြင့်​ကိုင်​ကာ ပြန်​လှည့်​လိုက်​သည်​နှင့်​….
ဟိတ်​…​ခွေးမ…နင့်​ကို လက်​နဲ့ ကိုင်​လာခိုင်းတာ မဟုတ်​ဘူး.. ပါးစပ်​နဲ့ ကိုက်​ချည်​လာခဲ့စမ်း…
ပိုး​လေး ပါးစပ်​နဲ့ ကိုက်​လိုက်​သည်​ကို ကြမ်း​ပေါ် ပြန်​ချခိုင်းကာ ကုန်းကိုက်​ခိုင်းသည်​။ ပိုး​လေးလည်း ခိုင်းသည့်​အတိုင်း ပါးစပ်​ဖြင့်​ က်ိုက်​ကာ ယူလာ​ပေးလိုက်​သည်​။ အန်​တီ​မေစီက ပိုး​လေး ယူလာ​ပေး​သော လည်​ပတ်​ကို ပိုး​လေးလည်​ပင်းတွင်​ တပ်​​ပေးပြီး သံကြိုးဖြင့်​ ချိတ်​ကာ သံကြိုးကို ဆွဲပြီး ထရပ်​လိုက်​သည်​။ ပြီး​တော့ အခန်းကို ပတ်​ပြီးကြိုးဆွဲကာ ​လျှောက်​သွားသည်​။ ပိုး​လေးလည်း ကြိုးဆွဲရာ​နောက်​သို့ ​ခွေးတစ်​​ကောင်​လို ​လေးဘက်​​လေး လိုက်​ရသည်​။
ထို့​နောက်​ကြိုးကို ဆွဲသွား​နေရာမှ မျက်​နှာဖုံးစွပ်​ လူများဆီသို့ ဦးတည်​သွားကာ….
​ခွေးမ သူတ်ို့ကို လီးစုပ်​​ပေးလိုက်​…. ​သေချာ ​ကောင်း​ကောင်းမွန်​မွန်​ စုပ်​​နော်​ သွားနဲ့ မထိ​စေနဲ့…
ပိုး​လေးတစ်​​ယောက်​ အန်​တီ​မေစီ စကားအတိုင်း မျက်​နှာဖုံးစွပ်​ လူ​နစ်​​ယောက်​​ရှေ့ ​လေးဘက်​​ထောက်​ကာ ​ဘောင်းဘီဇစ်​ကို ဖြုတ်​၍ လီးကုန်းစုပ်​​ပေး​လေသည်​။
အတန်​ကြာစုပ်​​ပေးပြီး လီး​တောင်​လာ​သော အခါ ခုံ​ပေါ်တွင်​ ကုန်းခိုင်းပြီး အ​နောက်​မှ လိုးသည်​။ အခြားတစ်​​ယောက်​က ထလာပြီး ပိုး​လေး​ရှေ့တွင်​ ဇစ်​ဖြုတ်​ပြီး ​စုပ်​ခိုင်းပြန်​သည်​။ ​ထိုလူ လီး​တောင်​လာ​တော့ ကုတင်​​ပေါ်တွင်​ ပက်​လက်​လှန်​အိပ်​ပြီး ပိုး​လေးကို အ​ပေါ်မှ တက်​ထိုင်းခိုင်းသည်​။ ပြီး​တော့ လှဲအိပ်​ခိုင်းကာ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​က ​နောက်​မှ ဖင်​ကို လိုးသည်​။ ကျန်​တစ်​​ယောက်​က ပါးစပ်​ကိုလိုးသည်​။ ပြီး​တော့ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​က ဂွင်းထုခိုင်းသည်​။
ပိုး​လေးမှာ ​စောက်​ဖုတ်​၊ ဖင်​၊ ပါးစပ်​၊ လက်​ တစ်​ခုမှ မအားရ​အောင်​ လုပ်​​ပေးရသည်​။ ပိုး​လေးမှာ အရှင်​လတ်​လတ်​ ငရဲခံ​နေရသည်​။ လိုးသည်​မှာလည်း ကိုယ်​ဆန္ဒပြည့်​​အောင်​သာ လိုး၍ ပိုး​လေးမှာ ဆန္ဒမပြည့်​ဝရုံမက ခံစားချက်​နည်းနည်း​လေးပင်​မရှိ.... မုဒိမ်းကျင့်​ခံသက်​သက်​သာ ဖြစ်​​နေရသည်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ထိုဘဝငရဲမှ လွတ်​​မြောက်​လိုစိတ်​ သာဖြစ်​​နေ​လေ​တော့သည်​။
လိုးပြီး​တော့ သုတ်​ရည်​များကို ပါးစပ်​ဟခိုင်းကာ ပန်းလွှတ်​သည်​။ မမြိုချခိုင်း၍ ပါးစပ်​မှ လျှံကျလာ​သော သုတ်​​ရည်​များက တစ်​ကိုယ်​လုံး စီးကျ​နေသည်​။ မျက်​နှာတစ်​ပြင်​လုံးလည်း သုတ်​ရည်​များ ​ပေကျံ​နေသည်​။
ပိုး​လေးမှာ သုတ်​ရည်​များ ​ပေကျံ​နေသည့်​အတိုင်းပင်​ ထိုင်​ခိုင်းထား၍ ထိုင်​​နေရသည်​။ သုတ်​လည်းမသုတ်​ခိုင်း ​ရေလည်းမ​ဆေးခိုင်းဘဲ ​ဆောင့်​​ကြောင့်​ထိုင်​ကာ အဖုတ်​ဖြဲခုိင်းထားသည်​။
အ​တော်​ကြာ​တော့ မျက်​နှာဖုံးစွပ်​လူများက ​သေးဖြင့်​ ၀ိုင်းပန်းကြသည်​။ ပြီး​တော့ ​ခွေးတစ်​​ကောင်​ကဲ့သို့ ​​​​ပေါင်​မုန့်​ကို ကြမ်းပြင်​​ပေါ်ပစ်​ချကာ စားခိုင်းသည်​။ ပါးစပ်​ဖြင့်​သာ က်ိုက်​စားရပြီး လက်​ဖြင့်​မကိုင်​ခိုင်း​ပေ။
ထို​နေ့တစ်​​နေ့လုံး နှိပ်​စက်​ပြီး ညနက်​မှ  အိပ်​ရသည်​။ မိုး​လင်း​တော့ ၀ိုင်းလိုးကြပြန်​သည်။ တမနက်​လုံးလိုးပြီး ​နေ့ခင်းကျ​တော့ ​ခွေးကဲ့သို့ နှိပ်​စက်​သည်​။ ည​နေ​ရောက်​ပြန်​​တော့ ​နောက်​တစ်​ကြိမ်​ လိုးကျပြန်​သည်​။
ပိုး​လေးစိတ်​ထဲဝယ်​ ​နောက်​​နေ့ လိင်​ကျွန်​​ရောင်း​သောအခါ မိမိကို ဝယ်​ချင်​​အောင်​ စိတ်​တိုင်းကျ လုပ်​ပြ​တော့မည်​ဟုသာ ​တွေး​နေမိသည်​။ ထို့မှသာ မိမိမှာ ဒီဘဝငရဲ မှလွတ်​​မြောက်​နိုင်​​တော့မည်​ဟု သိ​သော​ကြောင့်​ပင်​ဖြစ်​​လေသည်​။
သို့​သော်​ ပိုး​လေးမသိသည့်​က မိမိကို ဝယ်​​သောသူက မည်​မျှ ရက်​စက်​တတ်​သည်​ကိုပင်​ ဖြစ်​​လေ​တော့သည်​။